BOOSAASO, Puntland- Waxaa maanta duleedka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari lagu gubay lacag shilling Soomaali been abuur ah taasoo ay gacanta ku dhigeen laamaha ammaanka ee gobolkaas.
Lacagtaan oo goob fagaare ah dab lagu qabad siiyay ayaa gaaraysay sida mas'uuliyiinta Bangiga dhexe sheegeen 600,500,000 [Lix boqol oo malyan iyo shan boqol oo kun].
Shilling Soomaaligan faalsada ah ayaa dowladdu sheegtay in laga keenay Koonfurta Waddanka Soomaaliyad iyadoo lagu soo qariyay fuustooyin iyo baabuurta qaada Xamuulka, si loogu khal-khal galiyo gacansiga Puntland.
Goobta lagu gubyay lacagta waxaa ku sugnaa wasiirka wasaaradda Maaliyadda Puntland, Cabdullaahi Siciid Carshe Dhaqaaje, maas'uuliyiin kasocota bangiga dowladda iyo saraakiil kale.
Wasiir Dhaqaaje oo hadal kooban warbaahinta siiyay wuxuu tilmaamay in lacagtaas ay qabteen ciidamada amniga gaar ahaan kuwa jooga Kantaroolka Boosaaso, isagoo uga mahadceliyay shaqada ay sameeyeen.
Dhaqaaje ayaa xusay in dowladdu dedaal ku bixin doonto sidii ay uga hortagi lahaayeen shiling Soomaaliga lagasoo safrinayo gobollada kale ee lagu khal-khal galinayo ganacsiga.
Wuxuu shacabka ugu baaqay inay dowladda ka ganacsiiyaan shaqada ku aadan sidii looga hortagi lahaa lacagaha been abuurka ah iyo kuwa lagu dhibaataynayo shacabka ee lasoo safrinayo.
Arrintan ayaa kusoo beegantahay xilli bishii hore la qabtay lacagtan oo lagusoo qariyay Fuustooyin afka lagasoo alxamay iyo jawaano, xilli ay taagnayd xiisadda ka dhalatay kala sooca shilling Soomaaliga.